Maqaaxida Shanle Restaurang waa mid ku dayasho mudan | Somaliska
Isbuucii hore waxaan safar ku maray magaalada Malmö, anigoo waqti kooban ka qadeeyay maqaaxida Shanle Restaurang oo ay leeyihiin famil soomaali ah. Marka loo barbar dhigo maqaayadaha Soomaalida ee ku yaala Sweden ayay Shanle tahay tusaale ku dayasho mudan.
Sababta aan u leeyahay sidaaas ayaa ah in ugu horeyn ay maqaaxidu ku taal goob wanaagsan oo cidkasta ay si sahal ah ku heli karto, iyo in cuntadu ay tahay cunto Soomaaliyeed dhab ah. Maqaayadaha Soomaalida ee ku yaala Sweden ayaad waxaad ku arkaysaa in ay iibiyaan Pizza iyo Kebab oo mararka qaar aadan ka helayn Canjeero iyo Sambuus taasoo meesha ka saaraysa in ay isku magacaabaan maqaaxi Soomaali ah.
Shanle ayaa marka aad gudaha u gasho dareemaysaa in ay tahay goob Soomaaliyeed, iyadoo sawirada ku dhegan darbiyada iyo cuntadu ay tahay mid ka turjumaysa in goobtaan ay tahay mid Soomaali ah. Marka laguu keeno Menuga ayaad ka dheehanaysaa cuntadii aad taqaanay ee Soomaalida.
Ganacsatada Soomaalida ee furata maqaayadaha ayaa laga yaabaa in ay isleeyihiin amay macaamiishu inku yaraadaan haddii aad cunto Soomaali iibisaan balse waxaa la ogyahay in dadka Swedishka ah ay ka daaleen Pizza, Kebab iyo Thai oo ay doonayaan wax cusub, taasoo cuntada Soomaalida ka dhigaysa mid soo jiidasho leh.
Shanle Restaurang waxay ku taalaa Persborgstorget 1, 213 61 Malmö.
Gudoomiyaha magaalada Katrineholm ee cunsuriga ah [Video]
Dowlada oo soo bandhigtay miisaaniyada sanadka: Maxaa ugu jira Soomaalida?
Waa maashalah ilaahey mahadiisa waaye mar haddii cunto Soomali
wanaagsan mid ku dayasho mudan muufo tinaar iyo muufo Baraawe iney ku soo dartaa waaye